iPhone 11, XR, & XS ပေါ်မှာ Dual SIM နဲ့ eSIM ဘယ်လိုအသုံးပြုကြမလဲ | Myanmar Mobile App
Home How-To iPhone 11, XR, & XS ပေါ်မှာ Dual SIM နဲ့ eSIM ဘယ်လိုအသုံးပြုကြမလဲ
iPhone 11, XR, & XS ပေါ်မှာ Dual SIM နဲ့ eSIM ဘယ်လိုအသုံးပြုကြမလဲ
iPhone 11, XS, XR မော်ဒယ်လ်တွေမှာ dual-SIM လုပ်ဆောင်ချက်ကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် iPhone တစ်လုံးတည်းမှာပဲ ဖုန်းနံပါတ်နှစ်ခု ကိုင်ဆောင်ခွင့်ရခဲ့ပါပြီ။ ဖုန်းနံပါတ်နှစ်ခုထားပြီး အလုပ်နဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ခွဲခြားထားတဲ့ လူကြီးမင်းတွေအတွက်တော့ dual SIM နဲ့ eSIM ထောက်ပံ့မှုက ကြိုဆိုရမယ့်သတင်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာကို လှည့်ပတ်သွားလာနေတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုရင် ဖုန်းပြောခကုန်မှာကတော့ ကျိန်းသေပါပဲ။ ဒါပေမယ့် dual SIM နဲ့ eSIM နည်းပညာကြောင့် ရောက်တဲ့နိုင်ငံရဲ့ data plan ကို ထည့်သွင်းပြီးအသုံးပြုနိုင်တော့မှာမို့ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်တောင်ကောင်းလိုက်ပါသလဲ။
eSIM နည်းပညာကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် စာဖတ်သူရဲ့ iPhone မှာ iOS 12.1.1 နှင့်အထက် တင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ လက်ရှိ SIM ထက် အခြား carrier ရဲ့ eSIM သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ iPhone ကို unlock လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။
Dual SIM နဲ့ eSIM ရဲ့ ခြားနားချက်က ဘာတွေလဲ
iPhone 11, XR နဲ့ XS/XS Max တို့မှာ dual SIM ဖြစ်ဖြစ်၊ eSIM ဖြစ်ဖြစ် မတူညီတဲ့ plan ကို မပေးနိုင်ပါဘူး။ နှစ်ခုလုံးက ဖုန်းနံပါတ်နှစ်ခုထည့်ပြီးတော့ ဖုန်းခေါ်၊ မက်ဆေ့ချ်ပို့နိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးမှာပါ။ တစ်ချိန်မှာ data network တစ်ခုကိုသာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
eSim ဆိုတာက embedded SIM ရဲ့ အတိုကောက်စာလုံးဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ လက်ရှိမြင်နေကျဖုန်းကဒ်တွေလိုမဟုတ်ဘဲ software နဲ့လုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်သူထင်သလို Apple ထုတ်ကုန်တွေအတွက် အသစ်အဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။
Apple Watch LTE မော်ဒယ်လ်နဲ့ တချို့သော iPad Pro မော်ဒယ်လ်တွေအတွက် eSIM သုံးခဲ့ပါတယ်။
eSIM ဟာ digital SIM ဖြစ်ပြီးတော့ dual SIM ဟာ ဖုန်းကဒ်နှစ်ခုထိုးလို့ရတာပါ။ eSIM ကတော့ ဖုန်းကဒ်နှစ်ခုမလိုအပ်ပါဘူး။
eSIM ကို ဖုန်းကဒ်မလိုဘဲနဲ့ mobile plan အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ eSIM ဟာ iPhone ထဲမှာ ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာအရ သိမ်းဆည်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး eSIMs အများကြီးကိုလည်း ထည့်သွင်းနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် တစ်ကြိမ်မှာတော့ တစ်ခုပဲသုံးလို့ရမှာပါ။
ကျွန်တော်ကိုင်ထားတဲ့ iPhone 11, XR နဲ့ XS မှာ Dual SIM လား eSIM လား
iPhone ပေါ်က eSIM အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ တရုတ်၊ ဟောင်ကောင်နဲ့ မကာအိုတို့ကလွဲပြီး iPhones 11 မော်ဒယ်လ်အများစု၊ XRs နဲ့ XS/XS Max မော်ဒယ်လ်တွေမှာ ရနိုင်ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ iPhone 11 မော်ဒယ်လ် ၊ XS/XS Max နဲ့ iPhone XR မှာတော့ Dual SIM သုံးနိုင်မှာပါ။
eSim ကို VOIP service နဲ့သုံးနိုင်လား
အခုအချိန်မှာတော့ eSIM အတွက် VOIP မသုံးနိုင်သေးပါဘူး။
eSIM ဟာ Apple ရဲ့ eSIM နည်းပညာကိုထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ Mobile/Cellular Phone Carriers တွေဆီကနေသာ ရနိုင်ဦးမှာပါ။
iPhone မှာ Dual SIM ကို ဘယ်လိုသုံးရမလဲ
Dual SIM သုံးဖို့အတွက် iPhone 11 model, XS/XSMax ဒါမှမဟုတ် iPhone XR နဲ့ nano-SIM နှစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။ dual SIM ဆိုတာဟာ တရုတ်ပြည်မကြီးနဲ့ ဟောင်ကောင်၊ မကာအိုအတွက် ထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Carrier မတူတာကို သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တာ့ iPhone လေးကို unlock လုပ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Dual Nano-SIM ကို ဘယ်လိုသုံးကြမလဲ (တရုတ်နဲ့ ဆက်စပ်နိုင်ငံတွေအတွက်)
1. နောက်ဆုံးထွက် iOS version (အနည်းဆုံး iOS 12.1) ကို တင်ထားပါ
2. SIM card tray ထဲကို sim ထုတ်တံလေး ထိုးလိုက်ပါ။
3. SIM tray ကို ထုတ်လိုက်ပါ။
4. SIM card ထည့်ဖို့နေရာရှာလိုက်ပါ။
5. SIM card အသစ်ကို အောက်ဘက်မှာထည့်လိုက်ပါ။
6. နောက်တစ်ခုကို အပေါ်ဘက်မှာထည့်လိုက်ပါ။
7. SIM tray ပြန်ထည့်လိုက်ပါ။
iPhone မှာ eSIM အသုံးပြုနည်း
• နောက်ဆုံးထွက် iOS version တင်ထားပါ။ (12.1 နှင့်အထက် )
• iOS 12 (12.0 & 12.0.1) က eSIM ကို ထောက်ပံ့မထားပါဘူး။
• carrier ရဲ့ app ရှိမယ်ဆိုရင်carrier ဆီက QR codeယူပြီးတော့ ထည့်ရမှာပါ ဒါမှမဟုတ် eSIM အချက်အလက်ကို manually ထည့်လို့လည်းရပါတယ်။
• ကိုယ့်ရဲ့ wireless carrier လေးက eSIM နည်းပညာကို ထောက်ပံ့ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။
• carriers မတူတာကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ iPhone က unlock ဖြစ်နေရမှာပါ။
• CDMA carrier (Verizon or Sprint) တွေကတော့ nano-SIM (main SIM) ထုတ်ပေးတာဖြစ်လို့ eSIM မသုံးနိုင်ပါဘူး။
QR Code ရှိမယ်ဆိုရင်
1. Settings > Cellular ကိုသွားပါ။
2. Add Cellular Plan ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
3. QR Code ကို Scan ဖတ်ပါ။
1. Activation Code တောင်းရင်ထည့်ပေးလိုက်ပါ။
4. plan ကိုနာမည်တပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့။ ဒါမှ plan တွေကို ခွဲထားလို့ရမှာပေါ့။
1. main SIM ကတော့ Primary လို့ နာမည်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ပြောင်းလို့ရပါတယ်။
2. ဥပမာ တစ်ခုကို အလုပ်၊ တစ်ခုကို အိမ်၊ တစ်ခုကို ခရီးသွားလို့ ပေးမလား။
3. နာမည်ပေးထားခြင်းက ဘယ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုနေလဲဆိုတာ ပြန်ကြည့်ဖို့ အထောက်အကူပြုစေပါတယ်။
5. Control Center ကိုဖွင့်ပြီးတော့ plan နှစ်ခုလုံးကို ညာဘက်အပေါ်နားမှာ ဒါမှမဟုတ် Settings > Cellular ထဲမှာ မြင်တွေ့နိုင်မှာပါ။
Carrier ရဲ့ Appသုံး နေမယ်ဆိုရင်
1. iPhone မှာ App ကို အရင်သွင်းလိုက်ပါ။
2. App ကိုဖွင့်ပြီးတော့ app ကတစ်ဆင့် plan ဝယ်လိုက်ပါ။
1. App က iPhone ရဲ့ eSIM ထောက်ပံ့ပေးမှုကို ကြည့်ပါလိမ့်မယ်။
3. app ရဲ့ညွှန်ကြားမှုနောက်လိုက်လုပ်ပြီးတော့ plan အသစ်တစ်ခု ယူလိုက်ပါ။
eSIM အချက်အလက်တွေကို Manually ထည့်မယ်ဆိုရင်
1. Settings > Cellular (Mobile) ကို သွားပါ။
2. အောက်ကိုဆင်းပြီးတော့ Add Cellular Plan ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
3. အောက်နားလေးမျာ Enter Details Manually ဆိုတာလေးရှိပါတယ်။ နှိပ်လိုက်ပါ။
4. eSIM carrier ဆီကရလာတဲ့ eSIM အချက်အလက်တွေကို ထည့်လိုက်ပါ။ (phone number ၊ account information)
5. plan ကိုနာမည်တပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့။ ဒါမှ plan တွေကို ခွဲထားလို့ရမှာပေါ့။
6. Control Center ကိုဖွင့်ပြီးတော့ plan နှစ်ခုလုံးကို ညာဘက်အပေါ်နားမှာ ဒါမှမဟုတ် Settings > Cellular ထဲမှာ မြင်တွေ့နိုင်မှာပါ။
Verizon Wireless မှာ eSIM ဘယ်လိုသုံးမလဲ
eSIM ဝန်ဆောင်မှုအတွက် သုံးသလောက်ပေးအစီအစဉ်နဲ့သာ ရနိုင်ပါသေးတယ်။ ကြိုတင်ပေးပြီးအသုံးပြုနိုင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုတော့ မရနိုင်သေးပါဘူး။ Verizon Wireless plan ကို အသုံးပြုပြီးတော့ iPhone မှာ eSIM သုံးချင်တယ်ဆိုရင် My Verizon App မှာ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
1. App Store ကနေ My Verizon app ကို ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပြီးသွင်းလိုက်ပါ။
2. iPhone ရဲ့ IMEI ကို ကူးဖို့အတွက် Settings > General > About ထဲက Digital SIM IMEI ကို သွားလိုက်ပါ။
1. အဲဒီနံပါတ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ ကူးလိုက်ပါ။
3. My Verizon App ကိုဖွင့်ပါ။
4. Join now ကိုရွေးပါ။
5. Digital SIM IMEI ကို မေးလာရင် ဖြည့်ပေးလိုက်ပါ။
6. Check Eligibility ကို ရွေးပါ။
7. eligible ပြရင်တော့ Let’s Go ကို ရွေးပါ။
8. ဖုန်းနံပါတ် ၊ PIN သတ်မှတ်ခြင်း၊ plan ရွေးချယ်ခြင်း စတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း လုပ်ဆောင်သွားပါ။
9. ပြီးသွားရင်တော့ QR code လေးကို အီးမေးလ်ကတစ်ဆင့်ရပါလိမ့်မယ်။
10. QR Code ရထားရင် အပေါ်မှာပြောထားတဲ့အတိုင်း လုပ်ဆောင်လို့ရပါတယ်။
AT&T ရဲ့ eSIM အသုံးပြုပုံ
1. Settings > General > About ကိုသွားပြီးတော့ iPhone ရဲ့ IMEI နံပါတ်ကို ကူးလိုက်ပါ။
2. AT&T ရဲ့ website မှတစ်ဆင့် eSIM activation plan လေးကို အော်ဒါတင်ပြီးတော့ activate လုပ်ပါ။
1. iPhone model ဒါမှမဟုတ် IMEI နံပါတ်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။
2. eSIM activation ကိုအော်ဒါတင်ပြီးတော့ activate လုပ်ပါ။
3. Settings > Cellular > Add Cellular Plan ကိုသွားပြီး
4. QR Code ကို scan ဖတ်လိုက်ပါ။
5. QR Code ရထားရင် အပေါ်မှာပြောထားတဲ့အတိုင်း လုပ်ဆောင်လို့ရပါတယ်။
Dual SIM နဲ့ eSIM အတွက် eSIM Label ပြောင်းလဲခြင်း
2. ပြောင်းချင်တဲ့နံပါတ်ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
3. Cellular Plan Label လေးကိုနှိပ်ပြီး default labels ကိုရွေး ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ပေးလို့ရပါပြီ။
4. စိတ်ကြိုက်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ပြီးတာနဲ့ ကီးဘုတ်က done ကိုနှိပ်ပေးပါ။
iPhone ရဲ့ Mobile Plan Line Defaults ကို ပြောင်းလဲခြင်း
ဒီဇိုင်းအရ iPhone ဟာ physical SIM ကိုပဲ iMessage, FaceTime နဲ့ contacts ထဲမှာမရှိတဲ့သူတွေကို ဖုန်းခေါ်၊ မက်ဆေ့ချ်ပို့တွေအတွက် ဦးစားပေးနံပါတ်အနေနဲ့ အသုံးပြုပေးသွားမှာပါ။
iOS 13 သုံးနေတဲ့သူတွေကတော့ ဖုန်းနံပါတ်နှစ်ခုလုံးက Phone app နဲ့ FaceTime calls တွေလုပ်ဆေင်နိုင်မှာဖြစ်သလို iMessage, SMS နဲ့ MMS သုံးပြီး မက်ဆေ့ချ်ပို့ခြင်း၊ လက်ခံခြင်းတွေ လုပဆောင်နိုင်ပါတယ်။ iOS 13 က Dual SIM Dual Standby (DSDS) နည်းပညာသုံးထားလို့ နှစ်ခုလုံးက အသက်ဝင်နေမှာပါ။
ဒါပေမယ့် အရင်ဗားရှင်းတွေမှာတော့ cellular data network တစ်ခုကိုပဲ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
eSIM ကို အသုံးပြုဖို့ default settings ပြောင်းခြင်း
2. Default Voice Line ကိုသွားပါ။ (Cellular Data ကိုနှိပ်ရင်လည်း mobile data plan ရဲ့ နံပါတ်ကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်။)
3. default ထားချင်တာကို အမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ။ (iOS 13 +)
4. iOS 12 version တွေကတော့ “Use (line label) as your default line” ကိုနှိပ်ပေးရမှာပါ။
1. cellular data only ပဲဆိုရင်လည်း တိတိကျကျသတ်မှတ်ပေးလို့ရပါသေးတယ်။
2. “Use Primary as your default line” ဆိုတာက SMS, Data, iMessage, FaceTime ကိုအသုံးပြုပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ Secondary line ကတော့ ဖုန်းနဲ့မက်ဆေ့ချ်ပဲရနိုင်မှာပါ။
3. “Use Secondary as your default line” ဆိုတာက SMS, Data, iMessage, FaceTime ကိုအသုံးပြုပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ Primary line ကတော့ ဖုန်းနဲ့မက်ဆေ့ချ်ပဲရနိုင်မှာပါ။
4. “Use Secondary for cellular data only” ဆိုရင်ကတော့ ခရီးသွားတဲ့အချိန်မှာ ထည့်သုံးမယ့်သူတွေအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။ Primary line ကို voice, SMS, iMessage, FaceTime အတွက်ထားပြီးတော့ eSIM line ကို cellular data only ပဲထားပေးမှာပါ။
Cellular Plan SIM ဒါမှမဟုတ် eSIM ကို အလွယ်တကူပြောင်းခြင်း
1. eSIMs ပြောင်းဖို့အတွက် Settings > Cellular ကိုသွားပါ။
2. Cellular Plans အထိသွားလိုက်ပါ။
3. ပြောင်းချင်တဲ့ plan ကို ရွေးလိုက်ပါ။
4. Turn On This Line ကိုရွေးပါ။
eSIM နဲ့ Dual SIM iPhone တွေမှာ ဖုန်းလက်ခံပြောဆိုခြင်း
iOS 12 အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ iOS 13+ ကို တင်လိုက်မှပဲ နံပါတ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုနေချိန်မှာ အခြားနံပါတ်တစ်ခုကအဝင်ကောလ်ကို လက်ခံနိုင်မှာပါ။
iOS 13+ မှာ ဖုန်းလက်ခံပြောဆိုနေချိန်မှာ carriers က WiFi calling ထောက်ပံ့ပေးထားပြီးတော့ ကိုယ်ကလည်း ဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင် အခြားဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုရဲ့ အဝင်ကောလ်တွေကို ဖြေဆိုလို့ရပါတယ်။
ဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက် WiFi Calling နဲ့ Allow Cellular Data Switching ကို ဖွင့်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ default data line မဟုတ်တဲ့ပြောဆိုမှုဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာ အဝင်ကောလ်ကို လက်ခံနိုင်မှာပါ။
ဖုန်းကိုချလိုက်ပြီးတော့ voicemail ထည့်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ missed-call notification ကို လက်ခံရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ voicemail ကို အလိုအလျောက်ခေါ်ပါလိမ့်မယ်။
Carriers က WiFi calling မထောက်ပံ့ထားဘူးဆိုရင်တော့ Allow Cellular Data Switching ကို ပိတ်ထားတာဖြစ်ဖြစ်၊ WiFi calling ပိတ်ထားတာဖြစ်ဖြစ် အဝင်ကောလ်တွေက voicemail အဖြစ်သာ ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းခေါ်ဖို့ SIM ဒါမှမဟုတ် eSIM ကို အမြန်ပြောင်းခြင်း
Default အရတော့ iPhone ဟာ contact တစ်ခုအတွက် နောက်ဆုံးအသုံးပြုခဲ့တဲ့နံပါတ်ကိုသာ အသုံးပြုပြီးခေါ်ဆိုပေးသွားမှာပါ။ ဖုန်းနံပါတ်အသစ်ဆိုမှသာ default voice line ကို သုံးပြီးခေါ်ဆိုပါတယ်။
1. dialer ရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့ Primary ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ ဖုန်းခေါ်ဆိုမယ်ဆိုရင် ဖုန်းနံပါတ်ကို အလွယ်တကူပြောင်းလို့ရပါပြီ။
2. အသုံးပြုချင်တဲ့ SIM ဒါမှမဟုတ် eSIM line ကိုရွေးချယ်ပါ။
Contacts App ထဲကလူအချို့အတွက် အသေမှတ်ထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့
1. contact ကို နှိပ်ပါ။
2. Edit ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
3. Preferred Line ကိုရွေးပါ။
Cellular Data Plan ကို အမြန်ပြောင်းခြင်း
• Settings > Cellular ကိုသွားပါ။
• Cellular Data ကိုနှိပ်ပါ။
• cellular data သုံးချင်တဲ့နံပါတ်ကိုနှိပ်ပါ။
• Cellular Data Switching ကို နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ ဖုန်းခေါ်နေချိန်မှာ အလိုအလျောက်လိုင်းပြောင်းပေးအောင် လုပ်လို့ရပါတယ်။
Allow Cellular Data Switching လုပ်ထားပြီးတော့ voice-only number နဲ့ပြောချိန်မှာ အဲဒီနံပါတ်ဟာ အလိုအလျောက်ပြောင်းလဲပြီးတော့ voice and data အသုံးပြုနိုင်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြောနေစဉ်မှာ voice and data အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
Allow Cellular Data Switching ပိတ်ထားမယ်ဆိုရင် မဟုတ်တဲ့နံပါတ်နဲ့ဆက်တဲ့အခါ cellular data ကအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
iMessage ဒါမှမဟုတ် FaceTime သုံးမယ့် SIM or eSIM ရွေးချယ်ခြင်း
iOS 13+ မှာတော့ iMessage နဲ့ FaceTime ကို ကြိုက်တဲ့နံပါတ်နဲ့သုံးလို့ရပါတယ်။
iOS 12 version ဆိုရင်တော့ တစ်ကြိမ်မှာ နံပါတ်တစ်ခုတည်းသာ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ ဒါကြောင့် အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ default line ထားပေးရပါတယ်။
Settings > Messages > Send & Receive အောက်မှာ iMessage ကို နံပါတ်နှစ်ခုလုံးအတွက် ဖွင့်ပေးထားလိုက်ပါ။
Messages နဲ့ FaceTime မှာ အမှန်ခြစ်ထားခြင်းက နောက်ဆုံးအသုံးပြုခဲ့တဲ့နံပါတ်ကို မှတ်ထားတယ်လို့ပြောချင်တာပါ။
iMessage ၊ SMS/MMS အတွက် နှစ်သက်ရာနံပါတ်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီးတော့ မပို့ခင်မှာလည်း ပြောင်းလဲအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
Messages မှာ နံပါတ်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ
1. Messages ကိုဖွင့်ပါ။
2. ညာဘက်အပေါ်နားက New ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးပါ။
3. contact နာမည်ကိုရိုက်ပါ။
4. လက်ရှိဖုန်းနံပါတ် ဒါမှမဟုတ် label (primary, secondary, business) ကိုနှိပ်ပါ။
5. အရင်ကလုပ်ဆောင်ချက်ပေါ်လာရင်တော့ contact card လေးကိုနှိပ်၊ Edit လုပ်ပြီး ပြောင်းချင်တဲ့ဟာကို ရွေးလိုက်ပါ။
iOS 12 အတွက်
1. Settings > Messages or Settings > FaceTime ကိုသွားပါ။
2. iMessage & FaceTime Line ကိုနှိပ်ပါ။
message or FaceTime အသစ်ရေးရင်းနဲ့ အပြာရောင် ဖုန်းလိုင်းခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်း နံပါတ်တွေပြောင်းလဲနိုင်ပါသေးတယ်။
အလုပ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အပျော်ဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံအတော်များများကို မကြာခဏသွားနေရလို့ plan နဲ့ carrier တွေပြောင်းရမှာလား။ ဒါဆိုရင်တော့ eSIM တစ်ခုမက သိမ်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ကြိမ်မှာ တစ်ခုပဲသုံးလို့ရပါမယ်။
eSIM တစ်ခုချင်းစီတိုင်းက သူ့အတွက်သီးသန့် carrier plan တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။
eSIMs တွေကို ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ
1. Settings > Cellular > Cellular Plans ကိုနှိပ်ပါ။
2. သုံးချင်တဲ့ plan ကိုနှိပ်ပါ။
3. Turn On This Line ကိုနှိပ်ပါ။
Dual SIM iPhoneမှာ eSIM or nano-SIM ဘယ်လိုဖယ်ရှားမလဲ
ဆင်းကဒ်နှစ်ခုထဲကတစ်ခုကို ထုတ်ချင်တာ ဒါမှမဟုတ် eSIM တစ်ခုကိုများဖျက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ iDevice လေးက ဖယ်ရှားခြင်းကိုအတည်ပြုဖို့အတွက် မက်ဆေ့ချ်လေးပြပါလိမ့်မယ်။ eSIM နဲ့သက်ဆိုင်ထားတဲ့ contact တွေကိုလည်း ပြန်ပြီးသတ်မှတ်ဖို့လိုမယ်ဆိုပြီးတော့ အကြောင်းကြားတာဖြစ်ပါတယ်။
eSIM ထည့်ပြီးနောက်မှာ Instant HotSpot အလုပ်မလုပ်ခြင်း
eSIM တေွကိုပြောင်းသုံးပြီးနောက်မှာ instant hotspot ဝန်ဆောင်မှုကို မရတော့ဘူးလို့ သုံးစွဲသူတွေကပြောကြပါတယ်။ instant hotspot ဟာ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Apple device တွေမှာလည်း မပြသတော့ပါဘူး။
စိတ်ဝင်စားဖို့ကောငး်တာက eSIM အကောင့်နဲ့သုံးနေတဲ့ data plan သုံးတဲ့သူတွေက personal hotspot လုပ်လို့ရပေမယ့်လည်း instant hotspot မရဘူးဖြစ်နေတာပါ။
ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ physical SIM သုံးဖို့ပါပဲ။ physical SIM ထည့်လိုက်ရင် Instant Hotspot က အခက်အခဲမရှိအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ တခြား carrier ရဲ့ prepaid SIM တွေထည့်သုံးလိုက်ခြင်းအားဖြင့်လည်း သုံးစွဲသူတချို့က ဖြေရှင်းကြလေ့ရှိပါတယ်။
Apple ID ကို devices တွေအားလုံးမှာ sign out လုပ်ပြီးမှ ပြန်ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်း instant Hotspot feature ပြန်ရတယ်လို့ သုံးစွဲသူအချို့က ပြောဆိုထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်။
eSIM ထောက်ပံ့ပေးထားသော Wireless carriers
mobile carrier နဲ့ plan အားလုံးက eSIM ကိုထောက်ပံ့ပေးထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် Apple ရဲ့ eSIM ထောက်ပံ့မှုစာရင်းကို ကြည့်လိုက်တာက အဆင်ပြေပါတယ်။
eSim ကို payment plan နဲ့ အသုံးပြုလို့ရလား
iPhone ကို payment plan နဲ့ဝယ်မယ်ဆိုရင် carrier ကို lock လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် carrier တူတဲ့ eSIM ပဲ သုံးနိုင်မှာပါ။
ဒါပေမယ့် Verizon လိုမျိုးကတော့ SIM ကို lockချမထားလို့ အခြား carrier ရဲ့ eSIM သုံးလို့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်။
အကောင်းဆုံးကတော့ mobile phone carrier ကို ဖုန်းဆက်ပြီး eSIM ထောက်ပံ့မှုအကြောင်းမေးပါ။ ပြီးတော့မှ eSIM plan အကြောင်း စဉ်းစားပါ။
eSIM ဝန်ဆောင်မှုကို ကမာ္ဘအနှံ့က ထောက်ပံ့နေတဲ့ wireless carrier များ
ဒါကတော့ Apple ရဲ့ စာရင်းကို သွားကြည့်ရမှာပါ။
eSIM နဲ့ Dual-SIM တို့အတွက် မေးလေ့ရှိသော (FAQ)
လိုင်းတစ်ခုနဲ့ ဖုန်းပြောနေချိန်မှာ နောက်လိုင်းတစ်ခုနဲ့ မက်ဆေ့ချ်တစ်ခုဝင်လာရင် ကျွန်တော်က မက်ဆေ့ချ်ရမှာလား
iOS 13 အတွက်ကတော့ WiFi calling နဲ့ allow cellular data switching ဖွင့်ထားသမျှ ရပါတယ်။
ဖုန်းလိုင်းနှစ်ခုနဲ့ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အခြားလိုင်းအတွက် အဝင်ကောလ်ကိုတော့ call waiting က အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
SIM line က ဖုန်းကောလ်တစ်ခုနဲ့ eSIM line က ဖုန်းကောလ်တစ်ခုရမယ်ဆိုရင် အဲနှစ်ခုကို ပေါင်းလို့ရလား
physical SIM နဲ့ eSIM ကို ring tone မတူအောင်ထားလို့ရလား
စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ မရဘူးလို့ပြောရမှာပါ။ eSIM အတွက် ringtone သက်သက်ထားလို့မရပါဘူး။ Settings > Sounds & Haptics > Ringtone အောက်ကဟာကိုပဲ နှစ်ခုလုံးက အသုံးပြုပါတယ်။
iPhone နှစ်လုံးရှိတာမို့ တစ်ခုကအလုပ်နဲ့ တစ်ခုကိုယ်ရေးကိုယ်တာအဖြစ်ထားပါတယ်။ အခုတော့ တစ်လုံးတည်းကိုပဲ မက်ဆေ့ချ်ပို့၊လက်ခံ လုပ်လို့ရပြီလား
13 ဆိုရင်တော့ ရပါတယ်။ လိုင်းနှစ်ခုလုံးက မက်ဆေ့ချ်ပို့လို့ရပါတယ်။ iOS 12 တုန်းကလို ရွေးနေစရာမလိုတော့ပါဘူး။
Messages နဲ့ FaceTime ကလည်း နံပါတ်နှစ်ခုကို ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ iMessage နဲ့ FaceTime ကို စိတ်ကြိုက်နံပါတ်နဲ့ သုံးလို့ရပါတယ်။
Settings > Messages > Send & Receive အောက်မှာ ဖုန်းနံပါတ်နှစ်ခုလုံးမမြင်ဘူး။ ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲ
ဒီ setting ကို iOS 13+ သုံးမှ မြင်ရမှာပါ။ iOS 13+ သုံးထားပေမယ့် မမြင်ရဘူးဆိုရင်တော့ reboot လုပ်ကြည့်ပါ။
eSIM ရှိတဲ့အခါမှာ Apple ID နှစ်ခု သုံးရမလား SIM card အတွက် Apple ID နဲ့ eSIM အတွက် နောက်တစ်ခုပေါ့
မဟုတ်ပါဘူး။ eSIM ဒါမှမဟုတ် Dual-SIM သုံးတဲ့အခါ ဖုန်းနံပါတ်တွေဟာ Apple ID တစ်ခုတည်းကိုပဲ အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။
iPhone ကို factory reset ချလိုက်ရင် eSIM ဘာဖြစ်နိုင်လဲ
Erase All Content and Settings လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ eSIM ရောပါအောင် (Erase All) ဒါမှမဟုတ် settings (Erase All & Keep Data Plans.) ဆိုပြီးတော့ ရွေးစရာရမှာပါ။
DFU restoreလုပ်လိုက်ရင် eSIM ပြုတ်သွားမှာလား
DFU restore ၊ normal restore or update ၊ recovery mode အတွင်းမှာ eSIM ပြုတ်မှာပါ။
Resetting Network Settings, Reset All Settings, Restoring via iTunes/Finder app လုပ်ရင်တော့ eSIM အချက်အလက်တွေက တည်ရှိနေမှာပါ။
လက်ရှိသုံးနေတဲ့ nano-SIM ကို ဖြုတ်ပြီးတော့ eSIMအဖြစ်နဲ့ သုံးလိုက်ချင်တယ်။ ဒါမှလည်း SIM card slot တစ်ခုအားသွားပြီးတော့ ခရီးသွားတဲ့အခါ physical nano-SIM သုံးလို့ရမှာပေါ့။ ဒါကဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်တာပဲ။ ဘယ်လိုမြင်ကြလဲ။
iOS 12.1.1 နဲ့အထက် တင်ထားဖို့လိုတယ်။ eSIM ကို primary line အဖြစ်နဲ့ထားသင့်တယ်။ physical SIM slot ကို ဒီအတိုင်းအလွတ်ထားပြီး ခရီးသွားတဲ့အခါသုံးပေါ့။ primary number/service အတွက်ကတော့ physical or eSIM ကြိုက်တာသုံးနိုင်ပါတယ်။
Previous articleဒီလမကုန်ခင်မြင်တွေ့ရနိုင်တယ်လို့ သတင်းတွေထွက်နေတဲ့ ‘AirPods Pro’
Next article2020 iPhone တွေမှာ 120Hz high refresh rate ‘ProMotion’ display အသုံးပြုနိုင်